I-Malware kunye neendlela zokuKhusela i - I-Semalt iya Kukubonisa Ubuncinane Amacandelo
U-Julia Vashneva, i-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko yeMpumelelo yoMthengi, uya kuvula amehlo akho kwezinye izinto ezifunekayo xa zihlaselwa yi-malware.
Phantse sonke sisebenzisana ne-computer kunye ne-malware kwenye inxalenye yobomi bethu. Ndilungile? Akumnandi ukuba neentsholongwane; Kunoko, kufuneka uxhalabele ukhuseleko lwakho lwe-intanethi ukhuseleko. Xa ikhompyutha yakho iqalisa ukuphuculwa, yilexesha apho kufuneka uphephe i-malware kwaye uthathe amanyathelo angqongqo.
Se benzisa ukhuselo olulahla kuyo yonke indawo
Into yokuqala okumele uyenze ukuyisebenzisa ukukhusela i-layered at each point. Oku kuya kugcina inkqubo yakho ikhuselekile kuhlaselo olusekelwe kwiwebhu, ukusetyenzwa kwe-inthanethi, ukuguqula ii-virus kunye nokulayishwa ngokutsha - smart grain thermal cables. Ukuze ukhuseleko oluphezulu, kufuneka usebenze isofthiwe yakho yokukhusela isistim yokukhusela isiskripthi kwaye uyiskrose ifowuni kanye okanye kabini ngeveki. Ungaphinda uzame i-Intrusion Prevention Systems, Firewall, Insight, SONAR, kunye neAntivirus ukukhusela kwakho kwi-intanethi. Impendulo yeSmantec Security Response ithi sifanele sigcine isofthiwe kunye nezixhobo zokusebenza zokusebenza ngokukhawuleza.
Ukunciphisa umgangatho wokuhlaselwa
Ukunciphisa umgangatho wokuhlaselwa kubaluleke kakhulu. Kufuneka ukhiphe izicelo ongazisebenzisiyo. Makheke apha ndikuxelele ukuba iziphelo ezinobungozi obuphezulu okanye ezinobungozi zingabangela umonakalo omkhulu kunkqubo yakho. Yingakho kufuneka uhlole isikrini sakho kanye ngosuku kwaye uhlale kude nokufaka isofthiwe engaziwayo neyifuniweyo.
Ukuphucula izicwangciso zeStimant Protection Endpoint ezingapheliyo
Ukuphucula izicwangciso zakho zokugcina ukhuseleko lwe-Symantec kubalulekile..Nokuba izicwangciso ezimbalwa zingenza iinguqulelo kwi-intanethi yakho. Kufuneka ugcine izicwangciso ngeemfuno zakho kwaye uqinisekise ubumfihlo bakho ukuze abahlaseli bangakukhohlisi.
Gcina iifowuni ze-browser zihlaziyiweyo
Uninzi lwabahlaseli bavavanya iiphequluli zakho kwaye uzama ukusulela iifayile zakho. Yingakho kubalulekile ukugcina izicwangciso zakho zeeskripthi kunye neeplagi ngokusesikweni. Akufanele usebenzise i-Intanethi Explorer, Acrobat, Flash, kunye ne-Abode Photoshop ngaphandle kokuskena ikhompyutha yakho okanye idivayisi yeselula. Uninzi lwegciwane kunye ne-malware faka inkqubo yakho nge-Internet Explorer. Ngoko, kungcono ukuhlala kude nale mkhangeli kwaye uzame i-Google Chrome okanye esinye isiphequluli ozikhethile.
Vimba ukusetyenziswa kweP2P
Enye yeendlela ezilula kwaye zikhawuleza kubaduni abazisebenzisa ukusabalalisa i-malware ngethungelwano lontanga-peer (P2P). Kufuneka uhlale uvimba ukusetyenziswa kweP2P. Ngenxa yoko, unokwenza kwaye ugxininise imigaqo-nkqubo engekho-P2P enjengokusetyenziswa kwekhompyutheni yakho kufuneka ikhutshwe ukuze kungabikho baphandle abangakwazi ukufikelela kwisixhobo sakho. Ngale ndlela, unokuqinisekisa ukuba ikhompyutha yakho igcinwa kwi-malware kunye ne-virus.
Unokuyeka ukufika kweentsholongwane kunye ne-malware ngokuguqula i-AutoRun. Ngoxa ukhuphela into ethile, kufuneka uhlale ucima ukuze izinto ezingadingekile zingafaki zifakwe kwikhompyutha yakho.
Qinisekisa zonke ii-patches ezisetyenziswayo
Ekugqibeleni kodwa kungengona mncinci kufuneka uqinisekise ukuba nganye i-OS iqhosha lisetyenziswa ngokufanelekileyo. Iinkampani ezifana ne-Apple, iMicrosoft kunye ne-Google yokupaka iipakethi zesevisi, ukhuselo lwezokhuseleko kunye ne-hotfixes kubaxhasi babo behlabathi lonke ngenyanga. Iimveliso zazo zisinceda silungise ukusilela kwiinkqubo zethu zokusebenza. Unokufumana nayiphi na imveliso kwaye ufake kwi khomputha yakho ukhuseleko oluphezulu kunye nokukhuselwa kwe-intanethi. Ingaba usebenzisa ii-Mac OS X, iWindows okanye enye inkqubo yokusebenza, kufuneka uhlaziya rhoqo izikhangeli kunye neeprogram zakho kanye okanye kabini kwinyanga.